Shir looga hadlaayo Maalgashiga Soomaaliya oo maanta Nairobi ka furmay – Radio Muqdisho
Shirkan Caalamiga ah oo looga hadlaayo Maalgashiga Soomaaliya ayaa waxaa si wadajir ah u soo qaban qaabiyay Safaaradda Mareykanka ee dalka Kenya iyo Shirkadda lagu magacaabo Shuraako, waxaana ka qeybgalay Ganacsato,Diblomaasiyiin iyo mas’uuliyiin ka socota hay’adaha Samafalka waxaana uu maanta ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Shirkan oo sida uu qorshuhu yahay socon doona 3 Maalmood ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa sida ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa Ajaaniibta ah ay maalgashi ugu sameynsan lahaayeen Soomaaliya oo hadda ay ka jirto fursado maalgashi.
Maamulaha guud ee Shirkadda Dahabshiil C/rashiid Maxamed Saciid oo ku magac dheer Cabdirashiid Dahabshiil oo la hadlay VOA-da isla markaana kamid ah ganacsatada ka qeybgashay shirkan ayaa sheegay in shirka ay ka soo qeybgaleen boqolaal ganacsato Soomaali iyo Ajaaniib ah kuwaas oo danaynaya in ay ka faa’ideystaan fursadaha maalgelineed ee Soomaaliya.
“Shirkan inta uu socdo waxaa la kala saxiixan doonaa heshiisyo maalgashi, waxaa jooga waa ganacsato iyo maalgeliyiyaal wax siyaasad ah kuma jirto” waxaa yiri C/rashiid Dahabshiil.
C/rashiid ayaa sidoo kale sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed oo shirka ka qeybgalaysa ay intooda badan ka yimaadeen dalka inkastoo ay jiraan kuwo ka kala yimid Wadamada kale ee Caalamka, waxaa sidoo kale jira ganacsato Ajanabi ah oo shirkan lagu casuumay.
Maamulaha guud ee Shirkadda Dahabshii C/rashiid Dahabshiil ayaa ugu dambeyntii sheegay in markii ugu horeysay ay tahay oo dowladda Mareykanka ay qabato shir maalgashiga Soomaaliya looga hadlaayo, waxayna taasi tusaysaa sida dalka Soomaaliya horumar u sameynaayo.